Ugaas C/llaahi Ugaas Xaashi oo hambalyo ku aadan Ciida u diray ummadda Soomaaliyeed | Allbanaadir.com
Home NEWS Ugaas C/llaahi Ugaas Xaashi oo hambalyo ku aadan Ciida u diray ummadda...
Ugaas C/llaahi Ugaas Xaashi oo hambalyo ku aadan Ciida u diray ummadda Soomaaliyeed
Ugaas Cabdulaahi Ugaas Xaashi Ugaas Faracade oo kamid ah Salaadiinta Soomaaliyeed kuwooda ugu caansan ayaa hambalyo ku aadan Munaasabada Ciidul Fidriga waxa uu u diray Umada Islaamka gaar ahaan Umada Soomaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan.
“ Ciid wanaagsan ayaa leeyahay Ummadda Soomaaliyeed meel walbo oo Caalamka ay ka joogaan, Alle waxaan ka baryeynaa ciidan ciida xigta inuu nagu gaarsiiyo Caafimaad iyo Nabad buuxda” ayuu yiri Ugaas Cabdulaahi.
Ugaas Cabdulaahi Ugaas Xaashi ayaa ugu baaqay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay noqdaan kuwa mideesan oo wada jira, waxa uuna ilaah uga baryay in sanadkan kiisa kale ku gaarsiiyo nabad iyo baraare.
‘’Aniga oo ka faa’iideesanaya Munaasabada Ciida waxaan ugu baaqayaa umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan in ay noqdaan kuwa mid ah , waxaana ilaah ka baryeenaa in naga dulqaado dhibaatada dib u dhigtay dalkeena” Ayuu yiri Ugaas Cabdulaahi.
Previous articleMaalinta 1-aad ee Ciidul adxaa oo si weyn looga dabaal degayo Muqdisho & gobolada dalka